Global Voices teny Malagasy » India : Ajanony ny fanaovana hosoka ny yoga ! · Global Voices teny Malagasy » Print
India : Ajanony ny fanaovana hosoka ny yoga !
Voadika ny 18 Novambra 2019 5:03 GMT 1	 · Mpanoratra Juhie Bhatia Nandika (fr) i Anna Gueye, Sylvia Aimée
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, India, Fahasalamàna, Lalàna, Mediam-bahoaka
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Martsa 2009)
Napetrak'i India ny ekipa ahitàna mpikaroka sy siantifika hanatontosa iraka fijerena sy fandraketana ireo tena fomba fipetraka nentindrazana amin'ny Yoga (antsoina ihany koa hoe asanas  ) mba ho sarotra amin'ireo vahiny ny haka zo fizakàna ho fananany an'io fahalalàna io:
“Fanaovana hosoka ny yoga ” no anondroan'ny sasany ity fomba ity, izay atao mba hitompoana io fahalalàna io, satria misy olona manao izay hahazoana fizakàna na fangatahana zon'ny mpamorona ho an'ireo sary sy teknika yoga hita tany anatin'ireo lahatsoratra indiana efa tranainy be. Ohatra, araka ny lahatsoratra iray  an'ny Telegraph, raha tsy hilaza afa-tsy ny ao Etazonia fotsiny, misy 130 no isan'ireo fizakàna (brevet) ireo, 150 ny zon'ny mpamorona ary 2.300 ny maripamantarana voapetraka ara-dalàna.
Ho toy ny valinteny, nanomboka nataon'ny governemanta ‘scan’ ireo lahatsoratra ntaolo ary nanaovany fanamarinana ireo ‘asanas’. Ireny rehetra ireny dia notahirizina anaty ‘encyclopédie’ elektrônika iray momba ireo fitsaboana nentindrazana indiàna, nomeny anarana hoe “Traditional Knowledge Digital Library“.
Amit Agarwal milaza misimisy kokoa momba izany  (teny anglisy) :
“Velona ahiahy manoloana ny fitomboana tsy mitsahatry ny isan'ireo ‘gourous’ tandrefana mangataka zon'ny mpamorona amin'ireo lahatsoratra ‘asanas’ tranainy, nisafidy ny hamaly bontana ny governemanta indiàna.
Mpikaroka miisa 200 avy amin'ny Filankevitry ny Fikarohana Siantifika sy Indostrialy (CSIR) no navorin'ny Ministeran'ny Fahasalamàna ka iraka ho efainy ny fananganana angondrakitra iray mba hahafahana manamarina ireo rehetra fomba fipetraka sy teknika fantatra amin'ny yoga. ‘Encyclopédie’ elektrônika momba ny fitsaboana nentindrazana indiàna (TKDL) no anaran'io angondrakitra io .
Antenain'ny governemanta indiana fa holavina ireo fangatahana ‘brevet’ amin'ny hoavy, miainga avy amin'ny fanamarinana ny toetoetr'ilay hay (art) , sy ireo torohay izay manomboka izao dia ny TKDL no hanome azy.”
Hatreto, 600 ireo asanas  voarakitra ao anatin'ilay angondrakitra ary antenain'ilay tarika ny hahazo 1.500 raha kely indrindra hatramin'ny faran'ny taona. Betsaka no mankasitraka ity fandraisana andraikitra ity, ohatra, mpamaky iray ny Times of India, Marathi vedic, no maneho hevitra hoe  :
“Tohanako tanteraka ity hetsika ity… Tsy maintsy arovantsika ny kolontsaintsika izay tafihan'ireo tandrefana, tsy hoe fotsiny amin'ny alàlan'ireo ‘brevets’ fa koa amin'ny alàlan'ny asan'ireo misionera (kristiàna)… Mifohaza ry Védiques!!!! Firenetsika ity!!!! Kolontsaintsika, raha toa isika tsy mitahiry azy, iza no hanao izany ????”
Swami Param, maneho hevitra ao amin'ny bilaogy YogaDork, manampy hoe  :
“Betsaka ireo Hindoa no nahatsikaritra fotsiny fa raha ry zareo nanaparitaka ny Hindoisma sy ny yoga, ireo izay nandray izany ho fanomezana kosa nizotra tamin'ny fangalarana azy taty am-parany. Io Yoga tefitefena io dia ezaka nilofosana mba hanakanana tsy hahitàna ny fifandrohizan'ny hindoisma sy ny yoga. Mazava loatra, ny olona rehetra, na dia kely monja aza ny fahalalàna azony, dia hahatsapa fa ny hindoisma no tena yoga. Fotoana tena fotoana izao hampitsaharana ireny halatra , fanodinkodinana ary fandraharahana lazaina fa ‘yoga’ ireny”
Tonga teny alohan'ny sehatra ny famarotana ny yoga fony i Bikram Choudhury nomena ny zon'ny mpamorona, nametraka ny marikany ary nangataka ‘brevet’ iray ho anà endrika yoga noforoniny. Antsoina hoe “Bikram yoga (na “yoga mafàna”), misy fipetraka 26 ao anatiny, izay atao anaty efitrano nakarina ho 40°C ny hafanany, ary 40% ny hamandoana. Ao amin'ny Spot-On, Gopika Kaul manazava  izay nanosika an'i Bikram Choudhury :
“Ny fanaovana ny yoga aloha dia tanaty lahatsoratra masina hindoa no nofaritana, efa maherin'ny 5000 taona ary ireo olonkendry hindo no nanatontosa io hay io efa taonjato marobe…Ireo “gourous”, mahita fotsiny ny yoga ho toy ny fombandrazana indiàna naparitaka ho an'ny rehetra ary nosimban'ireo tandrefana mihitsy aza. Nahoana i Bikram no mitaky izany araka ny lalàna? Niova ny endriky ny yoga. Singa iray amin'ny kolontsaina indiàna – singa iray azo ambara ho ara-pinoana – no lasa orinasa iray milalao vola an-davitrisa.”
Araka ny voalazan'ny Yoga Journal  ao Etazonia, mampiditra 5,7 lavitrisa dolara isantaona ny yoga noho ireo fampianarana sy vokatra noforonina avy aminy. Ametrahan'ny olona sasany fanontaniana ilay hevitra hoe mitady vola amin'ny yoga.
guerrilla mama medicine manoratra hoe  :
“Matetika aho no mametraka fanontaniana noho ireo fifanoherana ara-kolontsaina hoe atao fitadiavana vola ny fampianarana yoga. Ny zavamisy hoe mampianatra hay sy siansa iray isika, izay azontsika idirana (avy amin'ny zavamisy hoe) i Etazonia dia hery iray ara-toekarena sy ara-tafika.
Mba aiza no misy ny fahatsiarovantena ara-maoralin'ireo mampianatra ny yoga? Ahoana no ahazoanareo miantso ny fampianaranareo ho ‘yoga’ dia avy eo tohananareo fa ianareo no namorona io fomba tokana fiondrehana mankany aloha io ? Raha ny teny sanskrit yoga no entinareo hiantsoana azy, very daholo ny zonareo amin'ny resaka ‘brevet’. Tsy hisy na iray aza olona ao India hanenjika anareo eny anatrehan'ny fitsarana satria kolontsaina iombonana io. Farafaharatsiny, indramintsika, mandritra ny fotoana fohy ihany, io fahalalana io ary avy eo averintsika.”
Kanefa, yomamma, maneho hevitra ao amin'ny Guruphiliac, mitondra fanamarihana fa tsy ireo tandrefana irery ihany no mahita tombony amin'ny yoga.
“Mandreraka ireny fitarainana momba ireo Tandrefana ataon'ny Aziatika sy ny Tandrefana ireny. Betsaka ireo Indiàna tonga aty satria vidianay ny zavatra ananany, tohananay ny zavakantony, ny ara-pivavahana, manome asa izahay, sns… Heveriko, araka izany, fa ny miabo no mandresy ao anatin'izany rehetra izany, na ho an'ny Andefana na ho an'i Azia.
… Ireo prôfesora rehetra fantatro mampianatra yoga dia manondro hatrany ireo nampianatra azy sy ireo efa nialoha làlana an-dry zareo ary tsy mihambo mihitsy ho namorona na inona na inona. Mahavita tsara ny fiainany ry zareo saingy izany dia indrindra noho ny asa mafy nataony sy ny fandavantenan-dry zareo. Nanomboka ny fanapariahana tany Andrefana, raha tsy izany dia efa nanomboka tsy hita ny betsaka tamin'ireny fomba fanao ireny, na farafaharatsiny tsy dia nahaliana be tahaka ny amin'izao fotoana izao. Rehefa voalaza izany, tsy manohitra io fiarovana sy fitompoana io aho, fa mety ho zavatra tsara mihitsy.”
Sarin'ny fomba fipetraka iray amin'ny yoga eo amin'ny fodiamasoandro  an'i Mahesh Khanna  tao amin'ny Flickr.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/18/144843/
 Fanaovana hosoka ny yoga: http://en.wikipedia.org/wiki/Yoga_piracy
 lahatsoratra iray: http://sn104w.snt104.mail.live.com/mail/un%20article
 milaza misimisy kokoa momba izany: http://www.labnol.org/india/interesting/india-fights-pirates-to-save-yoga/7532/
 toetoetr'ilay hay (art): http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_l%27art
 600 ireo asanas: http://timesofindia.indiatimes.com/India/Yoga-piracy-India-shows-whos-the-guru/articleshow/4167939.cms
 no maneho hevitra hoe: http://timesofindia.indiatimes.com/opinions/4167939.cms?curpg=2
 manampy hoe: http://www.yogadork.com/2009/02/23/india-to-save-yoga-from-western-pirates/
 Yoga Journal: https://globalvoicesonline.org%20http/www.yogajournal.com/advertise/press_releases/10
 manoratra hoe: https://globalvoicesonline.org%20http/guerrillamamamedicine.wordpress.com/2009/02/24/todays-reason-to-hate-capitalism-yoga-and-seeds/
 mitondra fanamarihana : http://guruphiliac.blogspot.com/2009/02/india-moves-to-protect-its-heritage.html
 fomba fipetraka iray amin'ny yoga eo amin'ny fodiamasoandro: http://www.flickr.com/photos/maheshkhanna/2175184797/
 Mahesh Khanna: http://www.flickr.com/photos/maheshkhanna/